I-NASA iqhuba uVavanyo loMsebenzi weNyanga
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-NASA iqhuba uVavanyo loMsebenzi weNyanga
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Technology • Iindaba ezahlukeneyo
I-NASA iqhube umlilo oshushu ngoMgqibelo wenqanaba eliphambili learhente yenkqubo yokuqalisa indawo (SLS) eya kuthi iphumeze i-Artemis I mission kwiNyanga. Umlilo oshushu luvavanyo lokugqibela kuthotho lweGreen Run.
Isicwangciso sovavanyo sasifuna iinjini ezine zerocket-RS-25 ukuba zitshise ngaphezulu kwemizuzu esibhozo- ixesha elilinganayo eliza kuthatha ukuthumela i-rocket emajukujukwini emva kokumiliselwa. Iqela ligqibe ngempumelelo ukubala ukubala kwaye lazitshisa iinjini, kodwa iinjini zazivale kancinci ngaphezulu komzuzu omnye emlilweni oshushu. Amaqela avavanya idatha ukumisela ukuba yintoni ebangelwe kukuvalwa kwangoko, kwaye aya kugqiba ngendlela eya phambili.
Kuvavanyo, iinyawo ezingama-212 Inqanaba lesiseko ivelise i-1.6 yezigidi zeepawundi, ngelixa i-B-2 yovavanyo lokuma kwiZiko leStennis Space kufutshane neBay St.Louis, Mississippi. Uvavanyo lomlilo olushushu lubandakanya ukulayisha i-733,000 yeepawundi zeoksijini engamanzi kunye ne-hydrogen engamanzi-ibonakalisa inkqubo yokubala ukubala-kunye nokufaka iinjini.
Uvavanyo lwangoMgqibelo ibilinyathelo elibalulekileyo eliya phambili ukuqinisekisa ukuba inqanaba eliphambili le-SLS rocket likulungele ukuthunyelwa kuka-Artemis I, kunye nokuhambisa abasebenzi kwimishini ezayo, utshilo uMlawuli we-NASA uJim Bridenstine, obezimase olu vavanyo. "Nangona ii-injini zingakhange zicime ixesha elipheleleyo, iqela lisebenze ngempumelelo kwi-countdown, lazitshisa ii-injini, kwaye lafumana ulwazi oluxabisekileyo kwindlela yethu eya phambili."
Amaqela enkxaso kuyo yonke indawo yovavanyo lweStennis abonelele ngeegesi zoxinzelelo oluphezulu kwindawo yokuvavanya, ahambisa onke amandla ombane asebenzayo, anikezela ngaphezulu kwe-330,000 yeelitha zamanzi ngomzuzu ukukhusela idangatye lokuvavanywa komlilo kunye nokuqinisekisa ukuthembeka kwesakhiwo senqanaba, kunye idatha efakiweyo efunekayo ukuvavanya ukusebenza kwenqanaba lesiseko.
"Ukubona zonke iinjinjini ezine zivutha okokuqala ngexesha lesiseko sokuvavanywa komlilo oshushu yayiyeyona nto ibalulekileyo kwiqela leNkqubo yokuSungula indawo" utshilo uJohn Honeycutt, umphathi wenkqubo ye-SLS kwiziko leNASA iMarshall Space Flight Centre eHuntsville, Alabama. "Siza kuhlalutya idatha, kwaye oko sikufundileyo kuvavanyo lwanamhlanje kuya kusinceda sicwangcise indlela eyiyo eya phambili yokuqinisekisa ukuba eli nqanaba litsha lilungele ukubhabha kwi-mission ye-Artemis I."
The Ukubaleka okuluhlaza uthotho lweemvavanyo luqale ngoJanuwari 2020, xa inqanaba lahanjiswa kwiNASA yeNdibano yeNdibano eMichoud eNew Orleans kwaye yafakwa kwindawo yovavanyo ye-B-2 eStennis. Iqela ligqibe okokuqala kuvavanyo lwesibhozo kuthotho lweGreen Run ngaphambi kokuma phantsi ngo-Matshi ngenxa yesifo se-coronavirus esiqhubekayo. Emva kokuphinda uqalise ukusebenza ngoMeyi, iqela lisebenze kwiimvavanyo ezisele zikolu ngcelele, ngelixa bema phantsi ngamaxesha athile njengeziphango ezitshisayo zetropiki okanye iinkanyamba ezichaphazele iGulf Coast. Uvavanyo ngalunye olwakhiwe kuvavanyo lwangaphambili ngobunzima obandayo bokuvavanya iinkqubo ezinobunkunkqele, kunye novavanyo olushushu lomlilo olukhanyise zine iinjini yayiluvavanyo lokugqibela series.
"UStennis khange alibone eli nqanaba lamandla okoko kuvavanywa amanqanaba eSaturn V ngeminyaka yoo-1960," utshilo uMlawuli weZiko laseStennis uRick Gilbrech. “I-Stennis yindawo yokuqala ye roketi evavanya iSaturn V kumanqanaba okuqala kunye nawesibini athwala abantu esiya eNyangeni ngexesha leNkqubo ye-Apollo, kwaye ngoku, lo mlilo ushushu kanye yile nto sivavanya ngokungathi siyabhabha kwaye sibhabha ngokungathi sivavanya. Siza kufunda ukusukela ukuvalwa kwangoko kwanamhlanje, sichonge naziphi na izilungiso ukuba ziyafuneka, kwaye siye phambili. ”
Ukongeza kuhlalutyo lwedatha, amaqela aya kujonga inqanaba eliphambili kunye neenjini zalo ze-RS-25 ngaphambi kokumisela amanyathelo alandelayo. Ngaphantsi kwe- Artemis Inkqubo, i-NASA isebenza ukuhlalisa umfazi wokuqala kunye nendoda elandelayo eNyangeni ngo-2024. I-SLS kunye nesiphekepheke seOrion esiya kuthutha oosomajukujuku ukuya emajukujukwini, kunye nenkqubo yokumisa umntu kunye neGateway ekujikelezeni kwayo iNyanga, ngumqolo weNASA ukukhangela indawo enzulu ..
Olunye ulwazi cofa apha
Ukuhamba noKhenketho zijongana nomsebenzi ophakamileyo ngama-39.6% ngoJuni
Nika iiVisa zabakhenkethi eIndiya ngoku zibongoza i-IATO ...
Iqela leRoyal Caribbean libiza amagama iNdawo eNkulu yokusiNgqongileyo ...
I-Israel iphinde ibeke igunya lokuzifihla kwiintsuku nje ezili-10 ...
IHaiti icela amajoni aseMelika ukuba akhusele ilizwe ...